Nweta Ọzụzụ Aka-Aka na Ubi IT na Ọdụ Kọmputa »Hodges U
Categories: -akpakọrịta, Bachelor, Teknụzụ Ihe Ọmụma Kọmputa, Kọmputa sayensị, Apụta, Ntuziaka Ntanetị, Technology
Kọmputa Sayensị vs. Kọmputa Teknụzụ Ihe Ọmụma Kọmputa
Ka anyị bido site na isi…… na-achọ Degree Science Science ma ọ bụ Degree Teknụzụ Teknụzụ Kọmputa? Azịza ya pụrụ iju gị anya.
Otutu mmadu chere na "sayensi komputa" dika okwu njide - ihe diri komputa. Nke bụ́ eziokwu bụ na ha abụọ agaghị abụ otu. Ọkwa dị na sayensị sayensị na-amụ akụkụ "sayensị" nke kọmpụta ebe kọleji teknụzụ teknụzụ kọmpụta na ntọala na-akwadebe gị ịrụ ọrụ aka na ụlọ ọrụ IT.
Anyị na-enye ogo kọmputa site na ọpụrụiche na-elekwasị anya:
Teknụzụ Ihe Ọmụma Kọmputa is a nhazi omenala nke ezubere iji nye ụmụ akwụkwọ iru eru ịrụ ọrụ na mpaghara IT n'ozuzu ha mgbe ha na-ekwe ka ụmụ akwụkwọ họrọ nhọrọ ndị ga-adabara ihe ọmụma ha, nkà ha, na ahụmịhe ha - na-eme ka ha nwee ihe ịga nke ọma.
Nchebe na ịntanetị bụ ogo nke na-enye ụmụ akwụkwọ ohere ịmaba n'ime cybersecurity na cyberattacks na-eji ịme anwansị na ngwaọrụ ndị achọtara n'ebe ọrụ iji ghọta ọ bụghị naanị etu mwakpo nchekwa si eme, kama otu esi egbochi ha.
Development Software bụ maka ụmụ akwụkwọ nwere mmasị na mmemme na nzuzo. Nke a bụ akara mmụta zuru oke maka ụmụ akwụkwọ nwere mmasị n'ịmepụta ngwanrọ SAAS, ngwanrọ metụtara ịntanetị (dị ka imewe weebụ ma ọ bụ e-ngwaọrụ), ngwanrọ ngwanrọ, ma ọ bụ ngwa.
Na Mahadum Hodges, anyị nwere ọfụma n'akụkụ aka nke ụwa IT iji mee ka ị banye n'ahịa ọrụ n'oge na - adịghị anya - iji ikike tozuru etozu na asambodo ọpụrụiche pụrụ iche. (Lee n'okpuru maka ozi zuru ezu na mmemme ogo anyị)
Klas nke dị oke ọnụ: Onye Bara Uru Na-arụ Ọrụ Na Ntanetị na ogo Teknụzụ Ozi
Bachelor Degree Centre: 15 Best Bachelor nke Online na Nhazi Ihe osise maka 2020
Kasị Mma College Nyocha: A Guide To Online kọleji Na Florida
Klas nke kacha mma: Ihe omumu nke ulo akwukwo kacha mma na komputa na 2020
Schoolslọ akwụkwọ bara uru kacha mma: Kachasị Ugo Kachasị Eserese N'ịntanetị
Mpaghara komputa: Umu akwukwo nke 20 kacha mma na teknụzụ ihe ọmụma 2016-2017
Eserese Ọkachamara Eserese: Ulo akwukwo nke 15 nke elu na ihe osise nke 2020
Eserese Ọkachamara Eserese: Top 15 ọtụtụ Bachelor dị na ntanetị na ntanetị na ntanetị 2020
Mụta.org: Nzere bachelọ kacha mma na teknụzụ ihe ọmụma (IT)
Akwa College na-emekọ: Ihe 20 kacha mma na kọleji dị na Florida
Ọgụgụ isi: Mmemme Degree Kachasị Mma Ihe Nlere Na Ntanetị
Mahadum State: Schoolslọ akwụkwọ ndị a ma ama maka Mmemme Kọmputa Kọmputa na Mmemme
Ugo kacha mma kachasị mma: Top 25 Mmasị Mmasị MIS kacha mma 2018
Lọ akwụkwọ kachasị mma: 10 Ihe omumu nke ulo akwukwo kachasi nma na komputa
Lọ akwụkwọ kachasị mma: Ihe Nlere nke Ulo akwukwo nke kacha mma nke ulo akwukwo
Lọ akwụkwọ kachasị mma: Ihe omumu nke ulo akwukwo kacha mma na komputa komputa
Schoolslọ akwụkwọ bara uru: Mmemme Bachelor 10 kachasị dị ọnụ ala na ntanetị na Design 2020
Mụta.org: Mmemme Degree nke Bachelor kacha mma na ntanetị
Womenmụ nwanyị na Teknụzụ
Na-emeghe ụzọ maka ụmụ nwanyị na teknụzụ ebe niile!
Na Fisher School of Technology, anyị kwenyere na ntinye mmadụ niile, gụnyere ụmụ nwanyị na ndị sitere na ndị na-akọwaghị akụkọ na STEM, dị oke mkpa maka ọganiihu na ọganiihu nke mpaghara IT.
Lelee ya n'ụzọ a, ụlọ ọrụ teknụzụ nke ọdịnihu ga-achọ echiche ọhụrụ na nke ọhụụ na-arụ ọrụ maka onye ọ bụla. Na-enweghị ntinye nke ụmụ nwanyị na-elekwasị anya na teknụzụ n'ọrụ ndị isi, mmepe nke ngwaahịa anyị na-eji kwa ụbọchị adịghị egbo mkpa ụmụ nwanyị na-eji ha.
"Ihe ọtụtụ mmadụ anaghị aghọta bụ na Mgbakọ bụ ntọala nke ihe niile ọzọ Science, Technology, Engineering na Mathematics (STEM) ọzụzụ," kwuru Lanham. Na Mahadum Hodges, Fisher School of Technology na-enye ogo nke na-enyere ụmụ akwụkwọ aka ịzụlite nka ndị achọrọ iji nwee mmetụta dị mma na ngalaba teknụzụ nke obodo azụmaahịa anyị.
Egosiputala na umu agbogho adighi agbasi aka oru na uzu dika ndi nwoke ha n’ihi na anaghi ekpughere ha ngwaike komputa, ngwanrọ, na nzuzo mgbe ha di obere iji choo ihe omuma ihe omuma ihe omuma komputa. Kama ịbịakwute gburugburu kọleji nwere ihe ọmụma yiri nke ahụ dị ka ndị ibe ha, ụmụ nwanyị na-eche n'azụ ma kwụsị ịhapụ ihe nwere ike ịbụ ụzọ ọrụ kachasị mma.
Mmemme Teknụzụ Ihe Ọmụma Kọmputa
Na-akpakọrịta na Science na Teknụzụ Ihe Ọmụma Kọmputa
AS anyị na Teknụzụ Ihe Ọmụma Kọmputa na-enye ntọala siri ike maka ma ọ bụ ọnọdụ ntinye na mpaghara IT ma ọ bụ iji chọpụta ebe ị na-elekwasị anya ka ị na-aga ogo ogo bachelọ.
Nwere ike ịkwadebe ụmụ akwụkwọ nwere oke ihe ọmụma gafee mpaghara mmeghe nke mpaghara teknụzụ.
Nwere ike ịkwadebe ụmụ akwụkwọ maka enyemaka enyemaka ma ọ bụ nkwado ụdị ọnọdụ IT na ụlọ ọrụ ọ bụla.
Ihe omume Java nke m na-enye nghọta dị mkpa banyere mmemme, nke nwere ike ịbara ụmụ akwụkwọ uru ka ha na-aga n'ihu na ngalaba ha họọrọ.
Usoro A + Hardware I na II gụnyere gụnyere ịnweta ọdịnaya LabSim ahaziri nke ọma na-ewetara ụmụ akwụkwọ nwere ọtụtụ ịme ntule nwere ike itinye n'ọrụ na klas n'ọdịnihu na gburugburu ụwa.
Studentsmụ akwụkwọ na-ahọrọ mmasị ha chọrọ ma họrọ ahọpụtara dabere na nhọrọ iche iche ha. General Technologies Information Computer, Mmemme na nzuzo, ma ọ bụ Cybersecurity na ịkparịta ụka n'mayntanet nwere ike ịnye ntọala dị mkpa iji chụọ akara mmụta bachelọ.
D in ka ọ dị na CIT usoro
Ntinye-Ọkwa IT Ọrụ
Bachelor of Science na teknụzụ Ozi Kọmputa
BS anyị na Teknụzụ Ozi Teknụzụ na-enye ụmụ akwụkwọ ohere ịhazi ogo ha dabere na nka na agụụ na agụụ maka ngalaba IT.
Usoro ihe ọmụmụ Powershell nwere ike inye ụmụ akwụkwọ ohere pụrụ iche iji nweta ahụmịhe nchịkwa nchịkwa ụwa dị mkpa iji mepụta ma na-agba ọsọ ederede ugboro ugboro gburugburu gburugburu iji mezue ikwughachi ugboro ugboro na ọrụ dị mgbagwoju anya n'ime nzukọ ọ bụla nha.
Nweta asambodo ụlọ ọrụ gị na ogo n'otu oge. Asambodo ụlọ ọrụ dịnụ gụnyere MOS, CompTIA A +, CompTIA Net +, CCNA, MCP, CompTIA Security +, & CompTIA Linux +.
Họrọ uzo ihe omuma ihe omuma nke komputa ma oburu na ichoro uzo di iche iche nke nwere ike igbanwe otutu oru di iche iche nke lekwasi anya n'ime udiri oru.
Nhọrọ na-enye ụmụ akwụkwọ ohere itinye aka na cybersecurity, ịkparịta ụka n',ntanet, njikwa data, ma ọ bụ ngwanrọ mmemme iji hazie ogo nke na-ahazi ahụmịhe mmụta iji kwado ebumnuche ụmụ akwụkwọ ọ bụla.
Studentsmụ akwụkwọ nwere ike ịmụta otu esi emebi nsogbu azụmaahịa iji chọpụta azịza IT kwesịrị ekwesị, wee mepụta ụzọ dị mma maka usoro mmejuputa zuru oke, gụnyere ọzụzụ nke ndị ọrụ na atụmatụ mmezi na-aga n'ihu.
BS na usoro CIT
Mmemme Cybersecurity na Mmemme ịkparịta ụka n'Networkntanet
Bachelor of Science na Cybersecurity na ịkparịta ụka n'.ntanet
A na-enye BS anyị na Cybersecurity na ịkparịta ụka n'withntanet na mmekọrịta, usoro aka (na-eji ngwaọrụ ndị dị na mpaghara ọrụ) maka ịgbanye ngwọta netwọkụ, yana nchọpụta cyber na mgbochi nke nwere ike inye gị nkà dị mkpa malite na ụbọchị mbụ.
Mmụta na-ọkọnọ ohere ịmụta otú njikota ike nke PowerShell na a Windows gburugburu ebe obibi ka ha wee leverage network nhazi aga-eme gafee dum nzukọ site na scripting usoro.
Hodges U na-enye akụrụngwa mebere maka ụmụ akwụkwọ ịtọlite ​​nhazi ịkwa emo dị iche iche iji dee, nwalee ma mepụta edemede PowerShell, nke nwere ike inye aka wulite ma mezie nka ha tupu ha abanye na ndị ọrụ ọrụ.
Mụta ihe ngwọta dị oke mkpa maka ịntanetị na ịkparịta ụka n'fromntanet ugbu a site na ngalaba nwere ahụmịhe bara uru n'ọhịa. Gee ntị dị ka prọfesọ gị, onye na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ gọọmentị, na-enye ihe atụ atụ, ezigbo ndụ nke cyberattacks ma kọwaa ọ bụghị naanị etu esiri wakpo ọgụ ahụ, kamakwa otu esi egbochi ya. Ihe omuma a sụgharịrị ịbụ ọzụzụ banyere otu esi achọpụta ma kpuchie nzukọ site na cyberattack, yana otu esi ahazi ma mezue usoro nhazi mgbe emechara agha megide nzukọ.
Mụ akwụkwọ nwere ike ịmụba nka nchekwa ha na usoro nkuzi anyị. E mikpuru ụmụ akwụkwọ n'ime mmekọrịta mmekọrịta ebe egosiri ha otu esi nyocha, nwalee, mbanye anataghị ikike, ma chekwaa sistemụ nke ha. Intlọ nyocha kpụ ọkụ n'ọnụ na-eme ka ụmụ akwụkwọ ọ bụla nwee ihe ọmụma miri emi na ahụmịhe bara uru na usoro nchekwa dị mkpa ugbu a.
ITlọ akwụkwọ IT anyị na-agba ọsọ na ntanetị nwere onwe ha na-enye ụmụ akwụkwọ ohere iji sọftụwia ngwanrọ maka ịkparịta ụka n'networkntanet, nchọpụta nche, na nyocha ihe omume. Oge nkwekorita a nwere ike inyere ụmụ akwụkwọ aka ịzụlite ma wusie ike ịntanetị na ịkparịta ụka n'ịntanetị site na ikwe ka ha na-agba ule ma na-eme ka ọnọdụ dị maka ụwa n'ezie, mmụta oge na-emeju usoro izizi ọdịnala.
Studentsmụ akwụkwọ ga-enwe ohere iji mepụta ọtụtụ netwọkụ mebere na sava na ebe ọrụ, mụta otu esi arụ ọrụ netwọ ọ bụla ọfụma ma rụọ ọrụ nke ọma, ma mụta otu esi achọpụta, dozie, ma gbochie ụdị egwu egwu dị iche iche na ngwa ọrụ netwọkụ nke nzukọ.
BS na Cybersecurity & ịkparịta ụka n'Networkntanet
Kọmputa Network Architect Careers
Mmemme Degree Degree Software (Usoro na Kọmputa Mmemme)
Bachelor nke Science na Software Development
BS anyị na Development Software nwere ike ịkwadebe gị ịmepụta ihe dị mma. Ma ị nwere mmasị n'ịmepụta ngwanrọ, mmepe weebụ, ma ọ bụ ụwa egwu egwu - anyị kpuchie gị.
Java Programming II nwere ike inye ụmụ akwụkwọ mmemme mmekọrịta mmemme. Mụ akwụkwọ nwere ike inweta nka na ide ederede sọftụwia dị mgbagwoju anya nke na-eme ka oge ogbugbu ya na ohere nchekwa nke mmemme software ahụ kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma.
Anyị na-ekpuchi ọtụtụ okwu nchekwa nke a na-ahụkarị na ngwanrọ ngwanrọ ma nwee ike ịkwadebe ụmụ akwụkwọ iwu koodu dị nkenke, arụmọrụ na nchekwa.
Nweta nghọta banyere otu esi etinye aka na nka ị na - amụta na gburugburu ụwa nke sitere na ndị prọfesọ na - arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ.
Maka ụmụ akwụkwọ na-achụ egwuregwu, anyị na-enye nkuzi na Okwu Mmalite maka mmemme egwuregwu na mmepe ngwa ngwa yana mmemme ngwa ntanetị yana ọdụ data.
Maka ụmụ akwụkwọ nwere mmasị na mmepe ngwanrọ weebụ, anyị na-enye nkuzi na mmemme mmemme Java, Programming Concepts II, Web Design I, Nhazi Ngwa nke Social Media na Collaborative Technologies, e-Commerce, Mobile Application Development, na Internet Programming na ọdụ data.
Studentsmụ akwụkwọ nwere ohere ịmụta asụsụ nzuzo dị ka akụkụ nke mmemme nrịgo mmụta ha, na-enweghị ogige ọ bụla chọrọ. Hodges U na-enye nkuzi na Java, Python, XML / Java (mmepe ngwa), C ++, HTML, PHP, Visual Basic (VB), C #.
Jiri ikike nzuzo nke ị mụtara na ọrụ dị ka ịmepụta ngwa gam akporo, ịmepụta mmemme ngwanrọ site na iji Java, ma ọ bụ ịmepụta egwuregwu ntọala nke na-etinye faịlụ dị mma, map tile, na ị na-agagharị iji mee ka onye na-egwu egwuregwu nwee ahụmahụ.
Mụta otu esi edozi ikike nzuzo gị yana iji mepụta ahụmịhe onye ọrụ zuru oke.
BS na Development Software
Ọrụ Development Software
Gịnị Na-eme Hodges U Apart?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmụ ogo metụtara kọmputa, ikekwe ị chọrọ ịma ihe mere ị ga-eji gaa Hodges U. Ihe omume anyị nwere iche iche iji kwadebe gị iji nyefee nsonaazụ na ọrụ mgbagwoju anya, nke metụtara IT.
ITlọ ọrụ metụtara ụlọ ọrụ IT nke etolite iji wulite ihe ọmụma dị mkpa ka ụmụ akwụkwọ na-aga n'ihu n'okporo ụzọ akara ugo mmụta ha họọrọ.
Mmekọrịta mmekọrịta bụ isi nke usoro ọmụmụ IT anyị ọ bụla. Hodges U na-arụsi ọrụ ike ịmụ ihe na ọkwa ọhụụ site na ịnye ụlọ nyocha, igwe dị iche iche na netwọkụ mebere maka ụmụ akwụkwọ iji nwalee nka na ihe ọmụma ha tupu a gwa ha ka ha rụọ ọrụ.
A na-ewebata nwa akwụkwọ ọ bụla na ntọala nke mmemme na-eji Java ma mụta itinye echiche nke mmemme iji mezue ọrụ mmepe sọftụwia dị oke mkpa. Studentsmụ akwụkwọ nwere ohere ide mmemme dị mfe nke na-egosipụta ịdị n'otu nke arụmọrụ ngwanrọ na nrụnye netwọkụ na usoro nchekwa.
Ejikọtara njikwa ọrụ n'ime mmemme ogo IT ọ bụla iji kwalite nkà ga-enyere ụmụ akwụkwọ aka ijikwa ọtụtụ ọrụ IT dị n'otu ọrụ gburugburu taa.
Mụ akwụkwọ nwere ike ịnwale ule akwụkwọ ụlọ ọrụ na Hodges U na ọnụ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ belatara, ma ọ bụ dị ka asambodo naanị ya ma ọ bụ dịka akụkụ nke ọrụ ha. Mgbe ha gụsịrị akwụkwọ, ụmụ akwụkwọ nwekwara ike ịnweta asambodo akọwapụtara nke ọma na mgbakwunye na diplọma ogo ha.
Degree nke BS Ozi Teknụzụ ọ bụla na-ejedebe na usoro Analysis & Solutions Architecture N'ezie. Usoro a na-enye ụmụ akwụkwọ ohere iji gosipụta nghọta ha banyere otu esi gbanwee ihe azụmahịa chọrọ site na usoro ndụ mmepe niile iji mepụta atụmatụ zuru ezu maka itinye usoro ihe ọmụma agbakwunyere n'ime nzukọ, si otú a na-enye ihe akaebe na nwa akwụkwọ a dị njikere na ọrụ IT n'ime mpaghara ha akọwapụtara.